I-White Zirconia, i-Pre-Shaded Colored Milling Discs, yeyiphi efanelekileyo kuwe? -News-VSmile Co., ltd
I-White Zirconia, i-Pre-Shaded Discs Milling Discs, leliphi ilungelo kuwe?
Ixesha: 2021-05-07 I ngxelo:36
Njengomphathi wokuSebenza kwiiVsmiles, ndiye ndathetha namakhulu wabanini beelebhu ezahlukeneyo kunyaka ophelileyo. Esi sixa sikhulu sencoko sandinika ulwazi ngezenzo, imibuzo, kunye neenkxalabo zelebhu yamazinyo ephakathi.
Eyona nto ihlala ixoxwa zizinto ezilungileyo nezingalunganga ze I-Zirconia emhlophe vs. Iidiski zokugaya ezenziwe kwangaphambili. Ngelixa ezinye iilebhu zisila ngokungqongqo zimhlophe, ezinye zenziwe zangqongqo, kwaye ezinye izinto zokugaya zidibanisa zombini. Nangona i-multi-layered (umthunzi we-gradient) iZirconia ifumana ingqalelo ekhulayo, ngenxa yeli nqaku, sixoxa ngqongqo I-Zirconia emhlophe vs. iidiski ezenziwe ngaphambili.
Abanini belebhu bafuna ukwanelisa iikhrayitheriya ezintathu ezisisiseko xa ukhetha idiski ye-zirconia:
lUmgangatho kunye nokuhambelana kwemveliso yokugqibela egqityiweyo
lUkusebenza kwenkqubo yokuvelisa
lIindleko zeZirconia Discs
Ke siye sagqiba kwelokuba sithelekise ii-disc zirconia ezimhlophe kwii-Zirconia zangaphambi kwe-Shaded kwindawo nganye kwezi zintathu zichazwe apha ngasentla., ndinqwenela ukuba luncedo.
1. Umgangatho kunye nokungaguquguquki koMdlali oQeqeshiweyo wokuGqibela weMpahla ngu:
lUmgangatho wemveliso yokugqibela eqaqanjisiweyo iya:I-Zirconia emhlophe"
lUkungqinelana kwemveliso yokugqibela egqityiweyo kuya ku: "Kwangaphambi komthunzi"
The I-Zirconia emhlophe I-disc ye-zirconia ibonelela ngegcisa lab elenza amazinyo i-pre-sintered "Blank Canvas" ukwenza ukubuyiselwa kwamazinyo okufana nobomi. Ngethoni ye-incisal kunye neekiti ze-inhibitor ezinje ngemveliso yeethoni ze-AMS, igcisa lebhu linokwakha zonke iimpawu ezinqwenelekayo kuwo onke amazinyo abebala. Le nkqubo inika itekhnoloji amandla amakhulu okufumana olona tshintsho lwendalo ukusuka kumthunzi we-gingival ukuya kumthunzi we-incisal. Ngamazinyo onke anobume bawo kunye nokuphakama kwawo uchwephesha unokubonakalisa izinyo langaphambi kokucheba ukuhlangabezana neemfuno ezifanelekileyo. Icala elicekeceke kule nkqubo kukuba ngenxa yokuba isithsaba ngasinye sinobunzima obahluke kakhulu kwi-zirconia kunokubakho ukungangqinelani ngendlela i-zirconia ewuthatha ngayo umbala, ishiya izinyo lasemva kokukhanya kakhulu okanye libi kakhulu, limnyama kakhulu.
I-disc esele yenziwe ibonelela ngobuchwephesha ngokungqinelanayo ngokubhekisele ekufumaneni i-post-sintered base shadow echanekileyo. Le nkcazo ithatha ukuba iinkqubo ezilungileyo zokuvelisa zilandelwa ngumenzi we-zirconia disc. Kodwa oku kungqinelana komthunzi osisiseko kuza kwiindleko zokungabikho kwenguqu yokudibanisa ukusuka kumthunzi we-gingival ukuya kumthunzi we-incisal. Oku kufuneka kufezekiswe kwibhentshi lebhu.
Sithathela ingqalelo olu didi lutayi. Nangona i I-Zirconia emhlophe inesona siphumo sibalaseleyo kwimveliso yokugqibela egqibeleleyo, kuya kufuneka ukuba siqwalasele izibonelelo ezinikezelwe kwangaphambili.
2. Ukusebenza ngempumelelo kwenkqubo yokuphumelela yile: “I-Zirconia emhlophe"
Ukufikelela kwisigqibo sethu siqwalasele ezi zinto zilandelayo:
lUkuhlalwa kweqela kunye nokuGaya
lAmaxesha amaXesha lokuBala lokuPosa
lIxesha lokuTshintshana kweMill / ukuseta
lAmaxesha Abasebenzi bokuPosa
Ukwakhiwa kweqela kunye nokuGaya:
kunye I-Zirconia emhlophe, ingcali yeelebhu kufuneka ihlele kuphela kwaye indlwane ngobude bezinyo. Oku kuvumela ugqirha ukuba aqokelele amanye amazinyo ndawonye kwidiski enye yamaxesha okwakha iindlwana kunye namaxesha okugaya afanelekileyo. Ngalo lonke ixesha uqala iprojekthi entsha yokwakha kubiza ixesha lakho ukulayisha idiski efunekayo kwaye ugcine ifayile entsha. Ilitye lakho lokusila likwasila ngokukuko ngenxa yokucholwa kwesixhobo somatshini ezimbalwa ngelixa usila amaqela amakhulu.
Ngenye indlela, ngeediski ezenziwe kwangaphambili, ngokwamaqela ngokobude kunye Umthunzi uthetha imithwalo engaphezulu yokuzalela kunye nokubaleka komatshini okuncinci. Zombini ezi zinto zongeza kwimeko yokungasebenzi. Xa oomatshini bakho bekwazi ukuguba ngexabiso leedola ezingama-300- $ 400, yonke imizuzu eli-15 yokungasebenzi kakuhle kubiza ilebhu yakho eyi- $ 75- $ 100.
Ukucwangciswa kweposi kunye namaXesha okuBala:
Ekupheleni kolungelelwaniso lwendlwana nganye, igcisa elebhu kufuneka libale ukubala emva kokuqhubekeka ukuze lenze ifayile enokufundwa ngumshini. Sifumanise ukuba amaqela amancinci amazinyo ahlanganisiweyo ongezelela kukungasebenzi kakuhle. Nanku umzekelo wento esiyithethayo: Indlwane inye kuphela izinyo kunye neprosesa yeposi enokuthatha imizuzu emi-2-5 ukubala ngokuxhomekeke kwisoftware yakho yokwakha. Amazinyo alishumi alishumi alinakongeza amaxesha ali-10 kumaxesha okubala emva kokuqhutywa. Ngaphezulu amazinyo owakha indlwane, ixesha elincinci 'ngezinyo ngalinye' liyafuneka ukuqhuba ngokuqhutywa kweposi. Ngaphezulu amazinyo owakha indlwane ngexesha ngalinye, ixesha elincinci ngenyo liyafuneka. Sikwafumanisa ukuba amagcisa athambekele ekuhambeni ngexesha lokwenza umsebenzi. Ikhompyuter inokuhlala ingakhathalelwanga kangangemizuzu eliqela xa kugqityiwe ukwenziwa. Izisombululo zokutya ngaphezulu ngemini, kokukhona ikhompyuter ihleli ingasebenzi ekupheleni kohambo ngalunye. Ukuzalela amaqela amakhulu amazinyo angama-10 ukuya ku-6 ngexesha elifanelekileyo, kwaye kunokwenzeka kuphela I-Zirconia emhlophe.
Ixesha lokuTshintshana kweMill / ukuseta:
Amaqela amancinci eediski ezihlanganisiweyo afuna ingqalelo ethe kratya. Sifumanise ukuba amatye okusila ahlala ngokungahoywanga nje ukuba umatshini wokugaya ugqibe umjikelo wokugaya. Amaqela amancinci athetha ukutshintshwa kweediski / ukuseta okuthatha iiyure zomntu kunye nokunyusa ithuba lokusila ukuba kungabikho mntu ulindileyo ukuze idiski itshintshwe. Ukubaleka okukhulu kwenza ukuba okusila kwakho kusebenze ngakumbi kwaye kufuna ingqalelo yomntu engaphantsi. Yi le kuphela kunokwenzeka nge I-Zirconia emhlophe.
Amaxesha Abasebenzi bokuPosa:
Le yindawo enye apho i-pre-shaded inenzuzo. Nje ukuba izinyo lahlulwe kwidiski, kufuneka licocwe kulo lonke uthuli kwaye lilungele i-oveni. Inkqubo ye- I-Zirconia emhlophekwelinye icala, kufuneka zihlelwe ngomthunzi zize zifakwe imibala. Kwiziko lethu lokugaya, ukuhlela kunye nokufaka imibala kufikelela kwimizuzwana engama-75 kwizinyo ngalinye. Ukuthatha isithsaba ezingama-40 ngosuku, oku kongeza kuphela iyure enye yomsebenzi kubuchwephesha belebhu. Siyakholelwa ukuba le yure ilungiswa ngokulula ngokusebenza okufumaneke ekwakheni indlwana nasekugayeni.
Siyayikholelwa loo nto I-Zirconia emhlophe iphumelele kuvavanyo lokusebenza ngokukuko nokuba kukongezwa umsebenzi wokufaka imibala ngesandla, esikufumanayo songa ixesha kwindawo yokugqibela kunye nebala le-glaze. Ukusebenza ngokuhlengahlengiswa kwefayile, ukwakhiwa kwendlwana, ukuqhubekeka emva kokuhlalwa, kunye nokutshintsha kwediskhi yomatshini wokugaya I-Zirconia emhlophe ocacileyo ophumeleleyo.
3. Iindleko zeZirconia Discs ophumeleleyo zezi: “I-Zirconia emhlophe"
Ixabiso leDisk nganye:
I-Zirconia emhlophe Iindleko zangaphambi komthunzi kwidiski nganye iya ngokucacileyo I-Zirconia emhlophe. Umahluko ophakathi weendleko zediski eyi-98mm x 12mm imalunga ne- $ 10 Kwidiski nganye. Oku kuphakamisa indleko yakho yezinyo elinye elenziwe kwangaphambili malunga ne- $ 1. Ngokuthelekisa, a I-Zirconia emhlophe izinyo lifunxa malunga (neesenti ezingama-20) zokufaka umbala wolwelo kwizinyo. Kumazinyo angama-40 ngosuku oku kuyakuxabisa ilebhu yakho ngaphezulu kwe- $ 8,000 ngonyaka okanye malunga ne- $ 700 ngenyanga.
Imfuno ezipheleleyo zoluhlu lwempahla:
I-White ifuna kuphela ukuba ubhale uluhlu lokwahluka kweediski. Ukwenza uluhlu lwe-pre-Shaded, kufuneka uluhlu lwezinto ezahluka-hlukeneyo kunye imibala eyahlukeneyo ngokudibeneyo. Nangona isikhokelo somthunzi weVita Classic sinee-16 shades, sifumanisa ukuba ilebhu yomndilili igcina malunga ne-10X Isixa sesitokhwe seZirconia esenziwe kwangaphambili kunaleso yelebhu isebenzisa I-Zirconia emhlophe.
Kubiza kakhulu ukusila kuyo I-Zirconia emhlophe I-V-Pre-Shaded ikuvumela ukuba unciphise iindleko zokuvelisa.
Sebenzisa iidiski ezenziwe kwangaphambili zikunika isibonelelo soMbala weChroma ongaguquguqukiyo kwi-1/3 yezinyo gingival kunye nesakhono sokuya ngqo kusitayile emva kokugaya.
Umhlophe ukukunika elona thuba lilungileyo lokufezekisa ukubuyiswa kwendalo okubonakalayo kunye notshintsho olusuka kwisiphumo seChroma ukuya kwisiphumo se-Enamel.
Umhlophe usebenza ngokukuko ngexesha lokwenziwa kweNesting, ukuPoswa kwePosi, kunye neenkqubo zokuTshintsha kweMill / ukuseta.
I-White ibiza kakhulu kwi-disc nganye kwaye ifuna uluhlu lweempahla ezinganeno kwaphela.
I-PREV: Ukukhetha iZirconia
OKULANDELAYO : I-Vsmile 3D Prism iZirconia Block Cases A3 Ukwabelana